Izikhala Zezinyawo - Ikhasi 2 kwezingu-22 - I-T mov RELAY
U-OL OL - OL: ILyon iwela lolu hlangothi, intengo yalo isemoyeni Juninho - Olimpiki…
Kusebenza kakhulu ngesikhathi iwindi lokudlulisela ubusika, i-Olympique Lyonnais ilungiselela nehlobo elizayo. Unalokhu engqondweni, uhlangothi lwe-Atalanta Bergamo lubhekiswe ngqo. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, igama likaRobin Gosens lalihlotshaniswa ne-Olimpiki…
Indebe yebhola laseFrance - CdF: Uhlelo kanye nemiphumela yomjikelezo we-8 - FOOT 01
Izithombe CDF Kuthunyelwe uMsombuluko ngoJanuwari 27, 2020 ngo-00: 20 Ku: Coupe de France. NgoLwesibili 28 Januwari 18pm: Belfort - Montpelfer Hérault (e-Eurosport…
U-OL OL - OL: U-Garcia uqinisekisa ukusebenza kweTousart ewindini lokudlulisa - i-Olympique Lyonnais…
Izithombe Icon Sport Kuthunyelwe ngeSonto ngoJanuwari 26, 2020 ngo-18: 20 pm Ku: OL. Imizuzu embalwa ngaphambi kokuqala komdlalo phakathi kwe-Olympique Lyonnais no…
I-ASSE: UPierre Ménès uhlangana noPuel efasiteleni lokudlulisa ehlobo - FOOT 01
Photo Icon Sport Kuthunyelwe ngeSonto ngoJanuwari 26, 2020 ngo-17:00 pm Ku: ASSE. NJENGOBA uSanta-Etienne ebuyela ekunqobeni ku-Ligue 1 ngoMgqibelo ekulweni…
U-Foot OL - OL: UBruno Guimaraes eLyon, i-ejenti yakhe noJuninho bayaqinisekisa! - I-Olimpiki…
Izithombe Icon Sport Kuthunyelwe ngeSonto ngoJanuwari 26, 2020 ngo-09h00 Ku: OL. IBruno Guimaraes izosayina kuze kube ngu-2025 ne-Olympique Lyonnais. I ...
I-Liga: Uhlelo kanye nemiphumela yosuku lwe-21th - I-FOTOT 01
Photo Liga Kuthunyelwe ngoMgqibelo ngoJanuwari 25, 2020 ngo-23: 00 Ku: Liga. NgoLwesihlanu ngoJanuwari 24 21:00 p.m: CA Osasuna - Levante UD 2-0 NgoMgqibelo ngoJanuwari 25 13:00 p.m:…
U-Foot OM - OM: Ngubani ofuna ukushiya uMarseille? Akekho futhi ikakhulukazi hhayi uSanson! - IFOOTBALL 01
Izithombe Icon Sport Kuthunyelwe ngoMgqibelo ngoJanuwari 25, 2020 ngo-23: 00 Ku: OM. Ukhulunywe njengomunye wabadlali abangase bathinte phesheya…
Football Nantes – FCN : L’hommage à Emiliano Sala, Gourcuff évite d’en faire trop…
Ngonyaka owodwa ngemuva kokushona kuka-Emiliano Sala, iFC Nantes izophinda futhi idlulise intela kulowo owayengumgadli wayo. Ngokwakhe, umqeqeshi uChristian Gourcuff ufuna ukuhlala ekalwa. Umdlalo we-Ligue 1 phakathi kweFC Nantes namaGirondins…
Allianz Riviera. I-OGC Nice - Isiteji saseRenis: 1 kuya ku-1. Izinjongo: iDolberg (47th) ye-OGC Nice; I-Tait (ye-81) yeStade Rennais. Ngesikhathi kuvulwa usuku lwama-21 lweLigue 1, i-OGC Nice neStade Rennais bashiye emuva bebuyela emuva (1-1). Ngemva ...
Foot OL – Mercato : OL, Leipzig, Barça, Dani Olmo affole l’Europe – Olympique Lyonnais…
Isebenza kakhulu ngesikhathi iwindi lokudlulisela ubusika, i-Olympique Lyonnais isivele isiqedele ukuqiniswa kusuka kuKarl Toko-Ekambi noTino Kadewere, ngemalimboleko eLe Havre. Ngakolunye uhlangothi, amaGones awakuboni kunesidingo ukuthi aqhubeke nokucasulwa kwe ...
sangaphambilini 1 2 3 4 ... 22 olandelayo
Ezokuphepha: lezi zimo ezi-3 lapho iphasiwedi kwakuyisixhumanisi…
I-vanilla ekhulelwe: Indodakazi kaJulien Clerc ibonisa isisu sayo ...
Ngiyabuzonda amanga, ukukhaphela, ubuzenzisi kanye nokungahloniphi ...
"AbaseCameroon bazoya kakhulu ezindaweni zokuvota ngoFebhuwari 09, 2020"
Yiziphi izimpawu zomdlavuza wendlala yesinye? - INDLELA YEMPILO…
E-India: Umklomelo unikezwe isikhulu esiphenya nge-RPF esisindise izingane ezi-3…
IZITHOMBE. ULannick Gautry: emuva ekuziphendukeleni kwemvelo koku ...
I-India: Umncane ngokwanele ukuba angashayela futhi abulale, kepha mncane kakhulu ukuba…